Umatilasi wasentwasasentwa eshibhile ngamanani aphelele | Rayson
I-raysonon eRaysonon Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Imikhiqizo eyinhloko efanelekile i-Affered Roll up bonnell entwasahlobo Spring Matress Abstres. Umatilasi we-Bonnell Spring up up ehlukile kukho, okwenziwe nguRayson kudume kakhulu phakathi kwamakhasimende. Lapho ugqoke lo mkhiqizo wekhwalithi, ukuqina okukhulu noma ukukhululeka okuzokwehlisa ukuzethemba komuntu ngeke kuzwakale. Imali ebiwe i-Bonnell Spring Matress inobungqabavu, obusetshenziswa kulo.
Njalo ulwela ukubhekela phambili, iRayyson yathuthuke ukuba yibhizinisi eliqhutshwa yimakethe neligxile kumakhasimende. Sigxile ekuqiniseni amandla okucwaninga kwesayensi kanye nokuqeda amabhizinisi wenkonzo. Simise uMnyango Wezemisebenzi Amakhasimende ukuthi unikeze kangcono amakhasimende ngezinsizakalo ezisheshayo kufaka phakathi i-Order Tracking Isaziso. Umatilasi wentwasana oshibhile Sithembisa ukuthi sinikeza wonke amakhasimende anemikhiqizo esezingeni eliphakeme kufaka phakathi umatilasi wasentwasahlobo oshibhile kanye nezinsizakalo eziphelele. Uma ufuna ukwazi imininingwane eminingi, siyakujabulela ukukutshela.umkhiqizo awutholwa ukuncipha. Inqubo yokuphumula yendwangu ivumela izindwangu ukuthi zinciphise ukuze kusheshe ukushwabana ngesikhathi sokusetshenziswa kwamakhasimende kuncishisiwe.
Ibizo I-mail Iphutha lefomethi